imali Russian | swedish currency.net A guide to buy foreign currency for goods and services exports
Home imali Russian RSS
Le engange ke yimali imali Russian
Le engange ke yimali imali Russian. Kwakhona isetyenziswe lwemali South Ossetia kunye Abkhazia leyo Imibutho ezimbini ezithatyathwa ngokungagqibelelanga. Le engange yayikade kusetyenziswa lwemali Soviet Union kunye uBukhosi Russian phambi kokuba ekugqibeleni bayiqhekeza. Ilizwe Belarus nayo imali igama elinye. 100 kopeks ukwenza 1 engange. Lwemali Russian alinayo nayiphi isimboli esetyenziswa ngokusemthethweni, nangona “py6” na akhronim esetyenziswa ngokubanzi. imiqondiso ezahlukeneyo eqwalaselwayo ngathi ngoku isigqibo uphawu olusemthethweni.
Ilizwi “engange” lithatyathwe kwigama “rubit” oko kukuthi “ukusika”. Kumaxesha angaphambili, engange yaba asisiso currency ebezisenziwa; kunokuba kwakunjalo ngomlinganiselo yexabiso kunye nobunzima. Okunye ngaphezu kopeks, le engange kwakhona zingahlulwa kwi Altyn (3 okuziikopeck), le grivennik (10 okuziikopeck), le polupoltina (25 okuziikopeck), kunye poltina (50 okuziikopeck). Kwaba ngomnyaka 1704 ukuba urhulumente Russian waqala kokukhupha engange zesilivere njengoko lwangoku Russian. 1 engange saqala ezixabisa 28 GM zesilivere kodwa 1760, njengoko lula ukuba 18 GM zesilivere. Phakathi kwiminyaka 1756 kwaye 1779, iingqekembe zegolide kukhutshwa phakathi kwiminyaka 1770 kwaye 1771, iingqekembe zobhedu zakhutshwa. Assignatsii, leyo iphepha iinowuthsi thembiso zazikhutshwa phakathi years1769 kwaye 1849.
Lwemali Russian otshitshe ukuhla kakhulu ixabiso ngokulungelelene nenani kwezinye iimali. Inyaniso, ekuyeni ekupheleni kuka-Agasti kwaye ekuqaleni kukaSeptemba 2014, sachukumisa arekhodelwe.
YaseRashiya bayangcungcutheka loQoqosho Depression kwakunye. nokuba, abantu banolwazi kakuhle iingxaki ezinxulumene yelizwe Russian lula. ixabiso le engange iye wavunyelwa ukuba kuwa abesezantsi nxamnye na dollar kunye euro. Oku wavunyelwa ngokuba uqoqosho Russian kubotshelelwe kakhulu kwi oyile, kwaye ukusukela oyile ukurhweba nge $49 komphanda bamphoxayo. Ndafunda ethile ukuba eRashiya oyile ukuba malunga $70.00 umphanda ukuze bakwazi ukulungelelanisa mali yabo nganye